Izinto eziluncedo nezingeloncedo ukuziqeshela imali yemali yabathengi
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Izinto eziluncedo nezingeloncedo ukuziqeshela imali yemali yabathengi
Njengokuba indawo ukuboleka imali, kukho kukuba ukusebenzisa indlela nemali yabathengi ngaphandle kweendonga. Naxa loo entsimini yentengiso
CM kunye phephancwadi, ndikubonile inkampani igama, wena ukuba abantu abaninzi.
Ngoko ke, ngaba unayo kunye Ziziphi izinto eziluncedo nezingeloncedo ukuboleka imali ngezezimali abathengi?
ngemali kwabathengi malunga iingenelo usebenzisa ngemali nkonzo, okanye eyayisaziwa ngaphambili ngokuba igolide uSara, ukuba yesakhono kwimizobo okanye ibizwa ngokuba Machikin.
ngoku, okanye no ebhankini, phezu kulula ukuyisebenzisa kwaye elungelelene isicelo kwi Internet, abantu abaninzi njenge abanobuchule ethembekileyo kwimizobo akuyi isicelo ukuboleka.
2 enye yezi zilandelayo iingenelo ngokusebenzisa loo ngemali umboleki uya ezicatshuliweyo.
ukumelana kukho omnye ukunyusa isantya iindleko ngesiquphe
Owokuqala kuchazwe ke njengoko inzuzo
nemali somxhasi ukuba ukugcina isantya. Mfutshane ukusuka isicelo
, ngoko ke unako ukugqiba uviwo malunga nemizuzu engama-30 ukuya kwiyure 1, ukwenza kube lula nayo iyafumaneka xa kuvele imeko kaxakeka.
Le nto iye yaba kunokwenzeka nokufika koomatshini mboleko yaqonda. Enoba akukho ivenkile kufuphi
, wena nokubhalisa uviwo kusetyenziswa oomatshini mboleko yaqonda ibekwe ababekweso sixeko nemimandla.
apha, emva kokuba ugcwalise amaxwebhu ayimfuneko, kodwa abe nazo phandle uviwo kunye ngomkhonto kwi efowunini umntu ophetheyo, sihlandlo oku kuthatha malunga nemizuzu engama-30.
Kutshanje, kananjalo inani iinkampani nokubhalisa ukuboleka ukusuka ezifana smart phones. Kuphela ukwenza ukungena
umhla wokuzalwa kunye nendawo yengqesho kunye nengeniso, i inokwenziwa ngokulula kwakhona isicelo na iingenelo. Amaxwebhu afunwayo emva kokuba uviwo
sele idlule, ukongeza ukuthumela koomatshini contract yaqonda, ukuba kusenokwenzeka ukwenza inkqubo ngeposi.
lula-to-ukuqonda elula imbuyiselo evela iinkqubo
Ukuba uboleke imali kwi
ngemali yabathengi, kokuphelisa imfuneko guarantors kunye isibambiso Njengomthetho jikelele.
phezu kwalo, yaye ukuba asayine eziliqela izihlandlo ezininzi kwesi sivumelwano, njengoko kuthelekiswa nezinto ezifana njengesiqinisekiso kunye ezifana ziqhutywa emva kwathabatha ixesha kwakhona, inkqubo ingongoma ilula kuyinyaniso kunye nezibonelelo. Ekubeni
ukuba le nkqubo elula kuphela, ngexesha nanceba, nayo iinkalo yenziwe isicelo ezifana ngomnxeba okanye Internet. Ukuba
kulo, akukho kukhathazeka malunga Barre ukuba nosapho kunye nabahlobo.
Kananjalo isici iye yaba lula kwakhona indlela intlawulo. Ukongezelela kunyango ngu
window, ngoko uhlawule kwi ATM kwisitora ingakhathalelwanga, unako ukuhlawula evenkileni lula ATM kunye zebhanki Internet kwiminyaka yakutshanje.
kwakhona evekini ngaphezu kwabo wabasebenzi ofisi ndixakekile, kuya lula uzive ukubuyisela ngaphandle kokuba licinezelwe ixesha.
umyinge wenzala endaweni inkqubo isantya inyuswe
Kuchazwe njenge umphezulu abaphumeleli ukuze ukusebenzisa
nemali nkonzo, na ukuphakama izinga lenzala. Nangona kungekho akananto
kunye iziqinisekiso, it beka kwi imali ephezulu imali ngaphezu kwesiqhelo ukwenzela ukunciphisa ingozi yokuqokelela.
Ukongeza, ukuba zingqamane umgaqo ukubuyisela kwindawo kwinqununu ezinxuseneyo kunye contract inzala, iye ngamatyala amaninzi ixesha ukuze ahlawule iba elide. Xa sijonga kuphela isixa lokuhlawula
ngenyanga, 3000 yen kunye 5000 yen kunye nabancinane ucwangco, abantu abambalwa ukuba ukusetyenziswa isilinge kakhulu.
, Noko ke, akukho nokuba abe nemali eyaneleyo njengoko intlawulo iinzame likaxakeka, kwiimeko ezininzi ukuhlawula isixa ubuncinane imali nyanga zonke nje, uba luhlobo, ezifana pay kuphela inzala, naye wayekholelwa ukuba bahlale ngaphandle ukunciphisa inqununu .
ngoko isiphakamiso asingomzekelo, usebenzise umyinge wenzala 0 eli phulo.
Oku, kwimeko abo ngokuboleka okokuqala uba zingahlawulwa ngenyanga yokuqala, amaqondo enzala kuthetha isicwangciso ukuba abe 0, sisicwangciso esisiseko noko ke ezimalini yabathengi.
Ngokuhlala nokuba imbuyekezo isixa semali khonukuze othile njengoko ayikwazanga zingahlawulwa ngenyanga yokuqala, akusekho loo intlawulo bekukudala lufuneka, luya kuba nako Ukunqanda umngcipheko isngenayo apha kumgxobhozo.
Iinzuzo ngokusebenzisa yezezimali
somxhasi ukuba yenziwe ekuphononongeni zokuboleka ukusuka isicelo kwixesha elifutshane.
uthathe amawaka aliqela yen emini ngenene, uya kunokuthiwa ezisindayo inxalenye olusingisa kwelo.
Kwelinye icala ukuba, ukuba umyinge wenzala yi ibekwe phezulu kwaye, ukuba inqununu kunzima ezimbalwa ziya kudweliswa ngexesha intlawulo. Ukuboniswa nokuba CM of
ngemali yabathengi, kamva ukuze loo nto ayimenzi abe buhlungu, makhe sizame ukwenza nengqiqo akukho sicwangciso intlawulo.
Ukongeza, kucetyiswa ukuba ukugcina umkhondo kanye ukuba kukho nasiphi na isicwangciso ukuba, ukususela umsebenzisi ngezimali nganye yephepha web kuba akwenzeki.
Nakaniwa, kunokuba ube ngogqibeleleyo ukuze indlela intlawulo ukukhetha isicwangciso yabo. It
abuyele ngobulumko ukuboleka ngobulumko, ngemali umthengi ukuba oku kunokwenzeka uya kuthi abe ally olomeleleyo.
ezinxulumene / eziluncedo nezingeloncedo zokuboleka imali kwi sakho ebhankini